Universal DVD ကို Player ကိုသည်အန်းဒရွိုက်ကားအီလက်ထရွန်းနစ်
ဖေါ်ပြချက်:Universal DVD ကို Player ကိုသည်မော်တော်ကားအီလက်ထရောနစ်,Universal Player ကိုသည်အန်းဒရွိုက်ကားအီလက်ထရောနစ်,universal ကားအီလက်ထရောနစ် DVD ကို Player ကို
Home > ထုတ်ကုန်များ > Universal Android Car Dvd > Universal DVD ကို Player ကိုသည်အန်းဒရွိုက်ကားအီလက်ထရွန်းနစ်
Universal DVD ကို Player ကိုသည်အန်းဒရွိုက်ကား Navigation
android ဖုန်းအပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince က Universal DVD ကို Player ကိုများအတွက် 1. အန်းဒရွိုက်ကားအညွှန်း, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက်7နှစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကျနော်တို့ဂျပန်, ရုရှား, ယူကရိန်း, တူရကီ, စပိန်ထံမှအများအပြားတန်ဖိုး clients များနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့ကြ , ဂျာမနီ, အီတလီ, အီရန်, ပါကစ္စတန်, ဒူဘိုင်း, အစ္စရေး, ကိုရီးယား, ဆော်ဒီအာရေဗျ, အိန္ဒိယ, ဘရာဇီး, etc ။
Universal DVD ကို Player ကိုအခမဲ့အွန်လိုင်းမြေပုံနှင့်အတူကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောသည် 2.This အန်းဒရွိုက်ကားအညွှန်း: သင်အလွယ်တကူထိုကဲ့သို့သော free.You များအတွက် Google မြေပုံ IGO, Sygic နှင့် Waze အားမြေပုံအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်းမြေပုံများအားဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်အရှိဆုံးတိကျမှုမရနှင့်ကို up-to နိုင်ပါတယ် -date လမ်းကြောင်းများ, traffic ကို data နဲ့ပိုပြီးနေထိုင်ကြသည်။ သင့်ရဲ့လမ်းတစ်ဝှမ်းပိုမြန်လွယ်ကူမည်သည့်အခါမျှရှာပါ။
Universal ကားတစ်စီး DVD ကို Player ကိုပင်မရာထူးအမည်များအတွက် 3. အန်းဒရွိုက်ကားအီလက်ထရွန်းနစ်:
6.2Inch တစ်လောကလုံးမော်တော်ကား DVD player အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
7 လက်မတစ်ခုတည်းသောကားတစ်စီး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Universal DVD ကို Player ကိုသည်မော်တော်ကားအီလက်ထရောနစ် Universal Player ကိုသည်အန်းဒရွိုက်ကားအီလက်ထရောနစ် universal ကားအီလက်ထရောနစ် DVD ကို Player ကို BMW ကား E90 ဘို့မော်တော်ကားအသံအီလက်ထရောနစ် တိုယိုတာ Levin သည်မော်တော်ကားအီလက်ထရောနစ် Player ကို Nissan ကား Qashqai 2017 မော်တော်ကားအီလက်ထရောနစ် ကို C Class ကိုသည်မော်တော်ကားစတီရီယို Hyundai Sonata ဘို့မော်တော်ကားအသံအီလက်ထရောနစ်